Panties Theater - Overview and Architecture
Pantanges Theater ao Hollywood. Sary © 2015 Kayte Deioma, licensed to About.com
Metro: Red Line ho Hollywood & Vine
Fiantsenana: Misy karazana fandoavam-bola maro eo akaikin'ny teatra, Sarintany
Ny The Pantages Theatre dia naorina tamin'ny taona 1930 tamin'ny alàlan'ny grika mpifindra monina sy ny sarimihetsika malaza Alexander Pantages ao amin'ny Hollywood Boulevard akaikin'ny zoron'ny Hollywood & Vine any Los Angeles. Io no kianja farany sy be pitsiny indrindra hitondra ny anarany. Ny mpanao mari-trano Seattle B. Marcus Priteca dia nanangana ny tranoben'ny Art Deco, izay manana fasana kely iray, manome lalana ho an'ny biraon'ny boaty misy kavina ary milina marevaka. Ny vola fanorenan-trano dia mitentina 1,25 tapitrisa dolara amin'ny taona 1929-30, izay mitovy amin'ny $ 10 tapitrisa ankehitriny.
Ny toeram-piavonam-piarahamonina dia miorina amin'ny andaniny roa amin'ny toeram-pitsangatsanganana iray, izay miambina amin'ny sarivongana maro samy hafa. Ao an-tampon'ilay tohadrano tandrefana dia misy sarimihetsika miloko iray misy sarimihetsika sarimihetsika ary amin'ny lafiny mifanohitra dia toy ny fiaramanidina fiaramanidina. Ny fanamaivanana baomba an-dabozia volamena volomparasy dia mianjera avy amin'ireo alikadia ambony eny amin'ny rindrin'ny lobby.
Ao ambadiky ny teatra, ny proscenium 54-foot dia voahodidin'ny seza 2 691 eo ambanin'ny fametrahana tsofandinon-tsofina mitsangana. Ny toerana dia natao natokana ho an'ny seza maherin'ny 3,000, saingy nanapa-kevitra izy ireo fa hamela efitrano maromaro kokoa ary hipetraka ho 2 812. Maherin'ny 1000 amin'ireo seza ireo dia narodana tamin'ny taona 1960 ho an'ny fitsidihana an'i Spartacus . Nohavaozina tanteraka ny Pantanty tamin'ny taona 2000, nanambara ny sasany tamin'ireo fiara taloha izay voarakitra an-dalam-pivoarana teo aloha ary namerina nametraka sasantsasany tamin'ireo singa tany am-boalohany nosakanana na nesorina.
Ny tantaran'ny tantaran'ny teatra
Alexander Pantages dia nanokatra ny Pantages Theater tamin'ny 4 Jona 1930 teo ambany fitantanana ny The Fox West Coast Theaters. Nandritra ireo taona voalohandohany, ny Pantages dia nampiova ny fampisehoana sarimihetsika miaraka amin'ny fampisehoana live vaudeville. Tamin'ny taona 1932, Alexander Pantages namidy ilay teatra tany Fox. Hatramin'io fotoana io, ny sarimihetsika dia nampiseho horonantsary voalohany indrindra, miaraka amin'ny fampisehoana mivantana fotsiny, afa-tsy ny taona 1940, rehefa nanao ny vanim-potoana manontolo ny Los Angeles Philharmonic .
Fox namidy ny Pantages tamin'ny 1949 tany Howard Hughes, izay nanamboatra azy teo ambany marika RKO ary namindra ny biraony ambony ambony. Nandritra ny folo taona niasany, dia nankalaza ny Akademia isan-taona ny teatra. Ny Oscars dia tsy maintsy nifindra tamin'ny taona 1960, rehefa navaozina ilay sehatra, nandrotsaka toerana maherin'ny 1000 ho toy ny fepetra takiana amin'ny fandefasana ilay sarimihetsika Spartacus . Noraisin'ny The Pacific Pacific ary nitazona ny Pantages ho toy ny sehatry ny fitrandrahana amin'ny taona 1970.
Ny sarimihetsika filma farany tao amin'ny Pantages Theater dia tamin'ny janoary 1977. Tamin'ny Jona tamin'io taona io, niova fo ny fandaharan'asan'ny fandaminana mpikaroka teto an-toerana. Mbola ampiasaina hatrany amin'ny anaran'ny Broadway LA izy io ary mbola manohy ny famokarana teatra an-tserasera. Ny ankamaroan'ny famokarana dia mitsidika ireo mozika Broadway sy ireo horonantsary hafa izay mihazakazaka andro vitsivitsy ka hatramin'ny roa volana.
Manatrika ny fampisehoana ao amin'ny The Pantages Theatre
Pantanges Theater ao Hollywood. Sary © 2007 Kayte Deioma, licensed to About.com
Ny Pantages Theater dia eo amin'ny 1/3 ny lehibe indrindra noho ny teatra Broadway, Gershwin, izay misy seza 1 900 fotsiny, noho izany ny fahitana ny fampisehoana Broadway ao amin'ny Pantages dia tsy dia tsara loatra raha mahita azy ao amin'ny Broadway, indrindra raha ao anaty seza mora, nefa tena mahavariana.
Ny fahasamihafana iray hafa izay hitanao eo amin'ny fampisehoana Broadway ao amin'ny Pantages sy ao New York dia ny fijerin'ny mpihaino LA kokoa kokoa, indrindra ho an'ny fampisehoana toy ny Wicked , izay manintona tanora maro. Mikiakiaka ny olona rehefa miseho sy mihiaka amin'ireo mpandray anjara amin'ny endriny izay tsy mbola henoko mihitsy amin'ny fampisehoana ao amin'ny Broadway ireo olona tiany indrindra. Raha anisan'ireny olona ireny ianao, dia mijanòna hanao izany! Ireo mpilalao dia afaka mandre anao.
Raha toa ianao ka mihaino tsara ary te hitazona izany, na ianao manatrika ny fampisehoana miaraka amin'ny ankizy, mitondrà vovoka . Hitako fa matetika ny fampihorohoroana mozika ao amin'ny Pantages no mampalahelo, na dia tsy manelingelina ireo naman-dry Rock n 'izy ireo aza izay nanary ny sasany. Ny zanaky ny ankizivavikely 4 taona dia nitazona ny sofiny ho an'ny ankamaroan'ny fomba nanombohan'ny Christmas Groll! The Musical . Matetika aho no maheno ny teny rehetra sy ny tsanganana rehetra amin'ny solaitraokan'ny 32-decibel snugly eo an-toerana.
Azonao atao ny mahita tapakilam- pifanakalozana tapakila ho an'ny fampisehoana any amin'ny Pantages Theater amin'ny goldstar.com (vakio ny Review of Goldstar.com ).
Fihetseham-po mahatsikaiky momba ny Pantanty Theater
Ny LA Philharmonic dia nilalao tao amin'ny Pantages nandritra ny taona 1940.
I Howard Hughes dia nipetraka an-tokotany nandritra ny fotoana izay nananany ny Pantages tamin'ny taona 1960.
Araka ny voalazan'ny mpikarakara Martin Wiviott, ny Pantages dia nalain'ireo vehivavy mpivady tao anaty lakaly ary lehilahy iray tia ny mipetraka amin'ny laharana faha-5.
Ny Pantages dia natao hananana tantaram-piantsoana 10, saingy taorian'ny fianjerana ny tsenam-bola tamin'ny 1929, dia nijanona teo amin'ny 2. Ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao dia mihevitra ny hamita ny sisa amin'ireo tantara 10.
Misy ny tsaho milaza fa i Barbra Streisand dia nividy mpivaro-pandaminana roa tao Pantange avy any amin'ny trano fitehirizana izay tsy hivoaka ny orinasa, saingy azon'izy ireo atao ihany koa ny afaka nihaona tamin'ny hafa. Novaina avy tamin'ny sary ireo kopia ankehitriny.
Resabe misimisy kokoa momba ny Pantanty Theater
Fantaro izay mandeha ao amin'ny Pantages Theater ary mividiana tapakila amin'ny www.broadwayla.org
Mitadiava tapakila tapakila amin'ny Pantages amin'ny Goldstar.com
Lahatsary fanadihadiana miaraka amin'i Martin Wiviott, tale jeneralin'ny Pantages
Sarimihetsika lahatsary mahaliana avy amin'ny Pantages avy amin'ny LA Historic Theater Foundation
Tantara maro sy sarin'ny Theater Pantles
Ny sarin'ny Pantages Theatre momba ny harena Cinema
Andro iraisam-pirenena ho an'ny Fahatsiarovana tsara indrindra any Los Angeles 2017
Tanànan'ny Los Angeles North Beach
Paska any Los Angeles 2018
Inona ny toeram-pivarotana mipetraka eny amin'ny Rodeo Drive any Beverly Hills?
Ireo zavatra 12 tsara indrindra hatao any Boulder, Colorado
Top 10 antony hitsidihana an'i Thailand
Cologne amin'ny Kids
Zavatra atao any Phoenix amin'ny volana Martsa
Top 10 Torohevitra momba ny fandehanana manerana ny Tetezan'i Brooklyn
Isle of Taboga - Andron'ny dia avy any Panama City
Ny Krismasy sy ny Taombaovao Mandeha any Karaiba